भगवानसँग भुलेर पनि नमाग्नुहोस् यी ७ कुरा ! – Online Khabar 24
हामी विश्वमा भएका सबै मानिसहरु आफ्नो फरक फरक धर्म भएपनि आफ्ना पूजा गर्ने मन्दिर, गुम्बा अथवा विभिन्न ठाउमा गएर आफ्ने देवतालाई पूजा गछौ ।
तर यस देवतालाई पुजा गर्नुको पछाडि सबैको एउटा न एउटा स्वार्थ रहेको हुन्छ ।जब मानिस खुसी हुन्छ ,त्यसले कहिल्यैपनि देवताको पूजा गदैन् ।
१. पहिलो हो , शिव, गणेश अनी भैरवलाई तुलसी चढाउनु हुँदैन ।२. त्यसैगरी दास्रो हो , स्नान नगरी तुलसीको पातलाई टिप्नु हुँदैन । शास्त्र अनुसार यदि कुनै व्यक्ति ननुहाइ तुलसीको पात टिप्छ भने पुजा गर्दा यस्तो पात भगवानद्धारा स्वीकार हुँदैन ।
३. तेस्रोमा तुलसीको पातहरुलाई ११ दिनसम्म बासी मानिँदैन । यसको पातहरुमा जल चढाएर पुन भगवानलाई अर्पित गर्न सकिन्छ ।४. त्यसैगरी चौथोमा यो दिन बिहिवार, एकादशी द्धादशी, संक्रान्ति तथा साँझमा तुलसीको पात टिप्नु हुँदैन ।५. पाचौमा सुर्यदेवलाई शंखको जलबाट अघ्र्य दिनु हुँदैन । भने बुधवार अनि बिहिवार पिपलको रुखमा जल चढाउनु हुँदैन । त्यसमा पनि दुवोलाई भने बिहिवार टिप्नु हुँदैन ।
६. त्यसैगरी छैटौमा रहेको छ, प्लास्टिकको बोत्तल वा कुनै अपवित्र धातुको भाँडामा गंगाजल राख्नु हुँदैन । गंगाजल तामाको भाँडामा राख्नु सुभ मानिन्छ ।यसो गरेर केतुकीको फुल पनि शिवलिंगमा चढाउनु हुँदैन।
७. सातैमा चाही, कुनैपनि पुजामा मनोकामनाको सफलताको लागी दक्षिणा अवश्य चढाउनु पर्छ । र यस बेलामा माता लक्ष्मीको विशेष रुपले कमलको फुल अर्पित गरीन्छ । यस फुललाई पाँच दिनसम्म जल चढाएर पुन प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले घरको मन्दिरमा विहान अनी साँझ दिप अवश्य बाल्नुपर्छ । साभार गरियको खबर यस्तै यो पनि
संसारका हरेक देशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुले विभिन्न धर्म मध्य कुनै एउटा धर्ममा आस्था राख्ने गर्छन।
सबैले आफ्नो धर्म अनुसार भगवानको पूजा आराधना गर्ने गर्छन। मान्छेहरु आफ्नो घरमा विभिन्न भगवानको मुर्ति राखी पूजा गर्छन।
यसरि भगवानमा आस्था राखी पूजा गर्दा भगवान प्रसन्न भई आफ्नो पूजा गर्ने व्यक्तिलाई आशिक दिने गर्नुहुन्छ।
यसरी सधैँजसो पूजा आराधना गर्ने बेलामा आफूले चिताएका चिताएका कुराहरु मनमनै सम्झिंदा आफ्ना इच्छा -चहाना पुरा हुँदै जाने विश्वास रहिआएको छ। हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार,हरेक घरमा कुनै ५ देव -देवीको मूर्ति राखी पूजा गर्नुपर्ने नियम रहेको छ।
यसरी पाँचै भगवानको मूर्ति राखी पूजा गर्ने विधिलाई पंचायतन भन्ने गरिन्छ।सनातन धर्म अनुसार पंचायतन पूजालाई सर्वश्रेष्ठ मान्ने गरिन्छ। गणेश,विष्णु ,शिव,दुर्गा र सुर्य ,यी ५ देवहरुलाई घरमा राखी नियमित रुपमा पूजा गर्नुपर्छ। प्रतेक घरको पूजास्थानमा यी पाँचै देवहरुको प्रतिमा राख्न जरुरि हुन्छ।
यी पाँचै देवहरुको आ -आफ्नो स्थानमा यिनीहरुको ईष्ट देव अनुसार सिंहासन खडा गर्न आवश्यक हुन्छ। आउनुहोस आज हामी तपाईहरुलाई कुन पंचायतन सिंहासनमा कसरी राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा बताउनेछौँ।
गणेश पंचायतन यदि तपाईको ईष्ट गणेश भगवान हो भने आफ्नो पूजा स्थानमा गणेश पंचायतन स्थापना गर्नुपर्छ। यसका लागि तपाईले उत्तरमा विष्णु ,दक्षिणमा शिव,मध्य भागमा गणेश पश्चिममा सुर्य देवता र उत्तर पश्चिममा देवी स्थापना गर्नु पर्दछ।
शिव पंचायतन यदि तपाईको ईष्ट शिव भगवान हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो पूजा स्थानमा शिव पंचायतन स्थापना गर्न आवश्यक हुन्छ।
यसका लागि, तपाईंको सिंहासनको उत्तर-पूर्वमा विष्णु , दक्षिणपूर्वमा सूर्य, मध्यमा शिव, गणेश दक्षिणपश्चिमा गणेश र उत्तरपश्चिमको भागमा देवी स्थापना गर्नुपर्दछ।विष्णु पंचायतन यदि तपाईको ईष्ट विष्णु भगवान हुनुहुन्छ भने आफ्नो पूजा स्थानमा विष्णु पंचायतन स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि तपाईको सिंहासनको उत्तर-पूर्वमा शिव , दक्षिणपूर्वमा गणेश , मध्यमा बिष्णु , र दक्षिणपश्चिमा सुर्य र उत्तरपश्चिमको भागमा देवी स्थापना गर्नुपर्दछ।
दुर्गा (देवी) पंचायतन यदि तपाईको ईष्ट देवी हुन् भने तपाईले आफ्नो पूजास्थानमा देवी पंचायतन स्थापना गर्नुहोला। यसका लागि तपाईको सिंहासनको उत्तर-पूर्वमा विष्णु , दक्षिणपूर्वमा शिव , मध्यमा दुर्गा , र दक्षिणपश्चिमा गणेश र उत्तरपश्चिमको भागमा सुर्य स्थापना गर्नुपर्दछ।सूर्य पंचायतन यदि तपाईको ईष्ट सुर्य भगवान हो भने तपाईले आफ्नो पूजा स्थानमा सूर्य पंचायतन स्थापना गर्न आवश्यक हुन्छ।
यसका लागि तपाईको सिंहासनको उत्तर-पूर्वमा शिव , दक्षिणपूर्वमा गणेश , मध्यमा सुर्य , र दक्षिणपश्चिमा विष्णु र उत्तरपश्चिमको भागमा दुर्गा स्थापना गर्नुपर्दछ। यो खबर जिन्दगीका पानाबाट साभार गरियको हो ।
Prevभूलेर पनि नगर्नुहोस् भान्सा कोठामा यी गल्ती, नत्र हुन्छन् पूरै परिवार कंगाल !
nextघरमा अशान्ती र धनको कमी हुने यी हुन आठ कारण !